Wasaaradda caafimaadka Puntland oo shaqo u joogta Gobollada Haayland iyo Sanaag | Puntland Ministry of Health
Wasaaradda caafimaadka Puntland oo shaqo u joogta Gobollada Haayland iyo Sanaag
Iyadoo ay beryahan Wasaaradda caafimaadka Puntland ay waddey dardar gelin caafimaad oo ku aadan dhammaan Gobollada Puntland, halkaas oo ay ka jirto abaar baahsan oo ay wehilliyaan xanuunno iyo dhibaatooyin kale oo ka dhashay abaarta, ayay wasaaraddu sagaal gobol u dirtay tiimam caafimaad oo xaaladda caafimaad daro ee meellahaas ka jirta gacan bir ah ku qabta.
Waxaa sidoo kale maanta oo bishu tahay 12.4.2017 u anbabaxay Gobolka Haylaand iyo Sanaag Wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Cabdinaasir Cismaan Ciise Cuuke oo ay wehelliyaan Agaasimaha Guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdirisaaq Xirsi Xasan, Agaasimaha waaxda caafimaadka aasaasiga ah Dr. Cabdirisaaq Abshir Xirsi. Ujeedada booqashadooduna waxay la xidhiidhaa soo furitaanka Xarrun caafimaad oo lag Furay Degmada Dhahar. Xarruntan oo loogu talagalay daryeelka carruurta nafaqada liidata. Xarruntan oo ah mid aad loogu baahi qabey ayaa dadka deegaanku aad u soo dhoweeyeen uguna mahad naqeen wasaaradda caafimaaadka Puntland iyo guud ahaan dowladda Puntland.
Wasaaradda caafimaadku waxay kaloo booqatay degmaa Badhan halkaas oo wasaaraddu ka hirgelisey xarrun caafimaad oo loogu talagalay daryeelka carruurta nafaqada liidata oo la mid ah tii hore looga hirgeliyey degmada Dhahar.
Waxaa kaloo safarka ku jira soo indho indhayn xaaladda abaareed iyo caafimaad ee Gobolladaas ka jirta iyo u kuur gelidda shaqada tiimamkii wasaaraddu dirtay ee ka socdaa halkaas.